mercredi, 24 mars 2021 18:59
Antenimierandoholona : Voafidy ireo solontena roa ho mpikamban'ny HCC
Notanterahina androany Alarobia 24 martsa 2021 tao amin’ny Lapa maitso Anosikely ny fifidianana ireo solontena roa avy amin’ny Antenimierandoholona handrafitra ireo mpikambana sivy ao amin’ny Fitsarana Avo momban’ny Lalampanorenana. Tao anatin’ny fivoriana azon’ny besinimaro natrehina moa no nanatanterahana izany. 17 no isan’ireo kandida nifaninana, ka nomena anjara fitenenana 3 minitra avy handresen-dahatra ireo Loholon’i Madagasikara. Saika olona efa nanana ny traikefany tamin’ny toerana nisy azy avy moa ireo mpifaninana ireo, ary olona efa niasa na niara-niasa teo anivon’ny Fitsarana ny ankamaroany.
mardi, 23 mars 2021 21:16
Antenimeram-pirenena : Ireo kandida hifidianana solontena roa ao amin'ny HCC
Antenimeram-pirenena : Ireo kandida hifidianana solontena roa ao amin'ny HCC (Jereo Sary Tohiny)
mardi, 23 mars 2021 18:38
Covid-19 : Niampy 06 indray ireo lavo
Tatitra ho an'ny andron'ny 22 martsa 2021 : Olona 66 vaovao no voatily fa mitondra ny tsimok'aretina coronavirus ny 22 Martsa 2021 tamin'ny tests 597. Analamanga 52Atsinanana 2Diana 4Alaotra Mangoro 2Boeny 5Itasy 1
mardi, 23 mars 2021 08:22
Tolagnaro : Vary 1 000 taonina hanampiana ireo tratry ny kere
Tonga ny alatsinainy 22 martsa ao amin'ny seranan-tsambon'i Ehoala eto Tolagnaro ny vary milanja 1 000 taonina avy amin'ny fitondram-panjakana Indiana hanampiana ireo Malagasy tratry ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka na ny kere any Atsimo. Sambo mpiady an'ny Tafika Indiana no nitondra ny vary tonga eto Tolagnaro ity. Vary izay vokatry ny fiaraha-miasa eo amin'ny Governemanta Indiana sy ny governemanta Malagasy. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 22 mars 2021 15:03
Oniversite Antananarivo : Manomboka ny fizarana vatsim-pianarana, natao lelavola
Roso amin’ny fizarana vatsim-pianarana ny Oniversite Antananarivo. Nanomboka androany izany ary misy fandaminana ho an’ny fizarana. Vao maraina dia efa filaharam-be no tazana teny an-toerana, tsy voahaja ny fepetra fiarovana amin’ny fihanaky ny Covid-19. Lelavola no zaraina, na vita aza ny digitalisation izay mitondra fandaminana vaovao amin’ny tokony handoavana ny vatsim-pianarana amin’ny “mobile money”. Vatsim-pianarana efa-bolana miampy fampitaovana ho an’ny taona voalohany, raha toa ka telo volana ny an’ny taona faharoa no miakatra satria efa nahazo fampitaovana sy vatsim-pianarana iray volana izy ireo. (Jereo Sary Tohiny)
lundi, 22 mars 2021 11:47
TSARADIA : Hiato 15 andro ny sidina Mahajanga sy Nosy-Be
Namoaka fanambarana ny TSARADIA, sakelika ao amin’ny Air Madagascar, fa hiatona mandritra ny 15 andro, ny 23 martsa ka hatramin’ny 5 Aprily 2021 ny sidina anabakabaka mivoaka sy miditra an’i Mahajanga sy Nosy-Be, raha tsy hoe misy fanomezan-dalana manokana avy amin’ny Aviation Civile de Madagascar (ACM).
lundi, 22 mars 2021 11:46
Marseille France : Nandrongatra ireo tanora tsy manaiky fihibohana
Miakatra ny valanaretina Covid-19 any Frantsa, betsaka ireo faritra nahiboka ho famerana ny fiparitahan'ny valanaretina. Naneho ny tsy fankasitrahana izany fihibohana izany anefa ny tanora tao Marseille ka dia nanao Carnaval goavam-be, nandraisan'ireo tanora efa 6500 isa omaly alahady 21 marsa 2021. Tafitohana tamin'izany ny mpitondra fanjakana sy olona maro, ka nandray ireto tanora ireto ho tsy manana toetra tompon'andraikitra mihitsy, izay vao maika ampiparitaka ity valanaretina ity. Ny frantsay moa izao dia efa miroso amin'ny fanaovam-bakisiny ho fiarovana amin'ny Covid-19.Omaly alahady 21 martsa dia 138 no matin'ity aretina ity, ary nitombo 30 581 ireo marary. Mahatratra 7 927 771 ny dozim-bakisiny efa voazara, ka olona miisa 2 297 100 amin'ny mponina 67.4 tapitrisa no efa vita vakisiny tanteraka (averina indroa ny dozy iray), 3.43% n'ny mponina.
dimanche, 21 mars 2021 18:03
COVID-19 : Lavo indray ny 06
Antontan’isa voaray ny 21 martsa 2021 : Isan’ny fitiliana : 1023Tranga vaovao : 209
dimanche, 21 mars 2021 17:27
Covid 19 : Ao anatin'ny 2 ème vague isika izao, efa eto ilay endriny vaovao avy atsy Afrika Atsimo
Tafiditra tanteraka ao anatin'ny 2 ème vague isika izao. Efa hita eto Madagasikara ilay coronavirus amin'ny endriny vaovao avy atsy Afrika Atsimo, ary olona 7 no efa fantatra fa mitondra izany. Tsy mbola misy vaksiny mahatohitra an’io « variant » io. Fitiliana miisa 07 tamin’ireo fitiliana miisa 18 nalefa tany amin’ny « Institut Pasteur Paris » ny 11 Martsa lasa teo no nahitana izany. Faritra 5 no tena voakasiky ny valanaretina ary ahitana tranga betsaka indrindra : Analamanga, Boeny, Atsinanana, DIANA ary SAVA Anisany nivoitra ireo nandritra ny tafa sy dinika nataon’ny Filoha Andry Rajoelina tamin’ny haino amanjery ny alin’ny sabotsy 20 martsa 2021. (Jereo Sary Tohiny)
samedi, 20 mars 2021 19:30
Covid-19 : Niampy 5 ireo maty
Antontan'isa voaray androany 20 martsa 2021 : Isan’ny natao fitiliana : 703 Tranga vaovao : 162 - Analamanga 90- Atsinanana 15- Diana 21- Matsiatra Ambony 8- Boeny 1- Vakinankaratra 3- Sava 10- Analanjirofo 4- Sofia 10